एफआईआर दर्ता हुँदापनि किन विपक्षी सांसद पक्राउ गरेन बलूचिस्तान प्रहरीले ? « Nepal Tube Australia
गृहपृष्ठ » News » एफआईआर दर्ता हुँदापनि किन विपक्षी सांसद पक्राउ गरेन बलूचिस्तान प्रहरीले ?
एफआईआर दर्ता हुँदापनि किन विपक्षी सांसद पक्राउ गरेन बलूचिस्तान प्रहरीले ?
एजेन्सी, क्वेटा । बलुचिस्तान प्रहरीले मंगलबार विपक्षी सांसदहरुलाई पक्राउ गर्न अस्वीकार गरेको छ । उनीहरूविरुद्धमा प्रहरी कर्मचारीमाथि आक्रमण गरेको र धम्की दिएको भन्दै पहिलो सूचना प्रतिवेदन (एफआईआर) दर्ता गरिएपनि पक्राउ गर्न अस्वीकार गरिएको हो ।